UkuBongamela nokuThengiswa koBucala - Udlala umdlalo
Izikhonkwane, izibetho, ukuzonwabisa
Ngexesha apho yonke into evunyelwe kwaye akukho nto isisongelayo, kunokuba nzima ukuva nokuvavanya. Ukuqhutyelwa kwezinto eziqhubekayo kuye kwenza abantu abaninzi banqabile ukukhwabanisa nokuziphatha ngokwesini. Ayinako ukuphefumula kwezinto ezingavumelekanga, apho iimeko zokudibana nazo zihlala zihlala khona.
Uthando, ukukhanga kunye nomdlalo
Kodwa umntu ngobuchule bakhe ngumthombo wokuvuselela rhoqo nokuvuselela. Ngoko uye waphumelela ukuphefumula ubomi obutsha ekukhuliseni.
Kwakudingeka ufune into ethile, kodwa ufumanisa izinto ezininzi okanye ezingaphantsi kwezinto kwaye ezi zijikelezwe yi-aura yezinto ezingaqondakaliyo nezingavunyelwe.
Isiqingatha-nobomi bobudlelwane buba mfutshane kwaye bufutshane, okungekho ubuncinane obubangelwa ukudibanisa ngokubhekiselele kwesondo.
Ngoko kufikelela kwisibini esingekho kuphela ukufumana ukuvumelana kwimibandela yemihla ngemihla, apho wonke umntu angaphila kakuhle, kodwa kwakhona ukuba aphinde aphinde aphinde azimise ngendlela yesondo.
Ngokuqhelekileyo into entsha, ukuthetha.
Wonke umntu unengcamango, kodwa kungekhona nje ingcamango, kodwa kunye neengcamango, iingcamango ezikhuselekileyo ziba ngakumbi. Into engabonakaliyo okanye ikhonkrithi eyenza umntu sele esele avuyiswe, ukuba ucinga nje ngawo. Ngokuqhelekileyo, izilingo ezinokukhathazeka azihlali zingagqibekanga ngenxa yokuba zingabonakali ngokucacileyo kwaye ziqondakala kunye neqabane. Kodwa oko akufuneki ukuba, kuba loo mlingane uneminqweno yecala eyimfihlo, engathanda ukuyenza.
Liyithuba lembini apha ukuba lincede omnye nomnye umthamo we-catapult ngokwayo kwinqanaba elilandelayo lokukrokra-kwaye akuthatheli ngaphezu kwengxoxo emfutshane.
Ngokuqhelekileyo, iminqweno yemfihlelo ayinqabile ... kodwa ngubani ofuna ukuqheleka? Akukho mntu! Ngokuqinisekileyo, ezinye iingcamango ziqhelekileyo kunezinye, kodwa zonke zilinganayo kwaye zilingana ngokulinganayo.
Inkalipho yelitsha apha ligama elingundoqo
Amabhangqwana amaninzi ahlala emangaliswa kukuba banokuzonwabisa kangakanani na kwiindlela ezintsha zesondo kunye nemiphumo emihle enokuthi ubomi obunelisekileyo bobulili bube nobomi bemihla ngemihla.
Imfesane efana ngokwesondo yabantu abaninzi ibandakanya ukukhonjwa kwazo zonke iintlobo. Kwaye akusikho uphuhliso olutsha. Kuye kwabonakaliswa ukuba ubukhoboka kunye nezinto ezinjalo kwiimbali ezibonakalayo zentlalo yinto ebonakalayo yesondo.
In abanemvume ayithethi, njengoko eRoma iinkcubeko zamandulo imigodi okanye ngaphambi eMesopotamiya ibingento Akumangalisi kakhulu malunga ikhubalo ekhethekile inkanuko kwiimbophelelo iqabane okanye ngokuba ngokwawo simelwe ukuzuza.
Izindlela zokubopha omnye umntu zininzi kakhulu kwaye kwakhona apho kunokuvelisa umnwabo omkhulu.
Njengomtsha wehlabathi kwiimidlalo zokugqithisa, kufuneka ukuba uqale ukulula. Oko akuthethi ukuba ayikwazi ukuba yintlango! Omnye kuphela mhlawumbi makangabi nangoko kunye ne-steam ezayo ngaphambi kokuzama ukungena kulo mbandela, kodwa ngokukhawuleza uyasondela. Kungenxa yokuba ngamanye amaxesha inzondelelo enkulu inokuphelisa ukuvavanya kwangaphambili - kwaye akufanele uvumele into enokuba yinto enhle kakhulu ididiswe ngokwenene. Ekuthuleni kunamandla.
Indlela engcono kakhulu yokuqalisa ekhaya kwaye kukho into ebhetele kuyo yonke ibhedi. Ngenxa yokuba ibhedi yasekhaya kaninzi inika iindawo ezigqwesileyo zokubakhoboka. Izithuba zokulala, intloko kunye neenyawo zinokusetyenziswa njengemilenze yesitya okanye isakhelo.
Kwakhona, ukukhethwa kwendawo, kunye nalowo uzimisele ukubopha umchasi wakhe kufuneka kuhlelwe kakuhle. Kukulungele ukunyuka ngezinto ezincinci. Ikhwele elihle mhlawumbi okanye intambo ethe tye - isikhumba kunye nefleksi ziya kuba nexesha elizayo (kwaye zifuna enye into engakumbi).
Awekho amaqhina amaninzi ekuqaleni. Nangona iqabane lifanele licele. Ngamanye amaxesha kwenzeka ukuba i-newbies ayifuni ivule amaqhina ... xa isetyenziswe ngokuchanekileyo, iyakudonsa amaqhina ngokwabo ngexesha lolo msebenzi. Yingakho akukho nto iphosakeleyo ngayo.
Yingakho kulungile ekuqaleni: Konke kuvunyelwe, kodwa musa ukukhawuleza nantoni na!
Abanye abantu bathanda umqondo wokusebenzisa amandla phezu kwabanye, kuba ngumzimba okanye ngengqondo. Abanye abantu, ngakolunye uhlangothi, bakhethe umqondo wokulawulwa komnye umntu - kwakhona ngokomzimba kunye nangokwengqondo.
Kukho izizathu ezininzi zezi. Amaninzi abantu, bazithobe kubomi bemihla ngemihla ngesondo abantu ezibalaseleyo kakhulu ukuba ngesigxina ku lawula inkampani okanye umntu kwinqanaba ngokuqinileyo. Kunjalo ke nabantu lubalaseleyo ngubani kusenokwenzeka ukuba azenzeki ezantsi oneentloni ngaphandle lokulala. Uhlala ukhangele into ongenayo - kwintsibano yesondo.
Ukudlala indima kunye nokulawula
"Amasimu omsebenzi" olawulayo kunye nabazinikeleyo banokungenamkhawulo. Ngokuqhelekileyo imidlalo ekhonjwe ngokugqithiseleyo isetyenzisiweyo ukubonisa indima yeqabane ngalinye. Kodwa ngokuqinisekileyo kunokuhamba ngaphezu kwe "imidlalo" yobungqina.
Abanye abazinikeleyo banomuvo okhethekileyo ekubonakalweni kwintlungu. Ukwenza le ntlungu, ungasebenzisa izixhobo ezahlukeneyo-kuba yizibetho, iimbhobho okanye iiklabhu okanye iinqwelo. Abanye bathanda kunzima kunabanye.
Kodwa intlungu yengqondo ayiqhelekanga kwiibumbi zokulala ezibini ezinomdla wokudlala imidlalo. Ngamazwi okanye iintlobo ezithintekayo zendlela yokuhlukunyezwa kwengqondo esele ikhona kunokubangela amanxeba aphantsi kwengqondo ... Kakade, azinasigxina kwaye kuphela ngenjongo yokwandisa injabulo ngexesha lomsebenzi.
Kufuneka uqaphele ukuba ungadluli. Ngaphambi kwesenzo ngasinye kufuneka wenze kunye neqabane elibizwa ngokuthi "igama elikhuselekileyo". Ukuba eli lizwi elikhuselekileyo libizwa, zonke izenzo kufuneka zimiswe ngokukhawuleza kwaye zingenasichaso. Ngenxa yoko, njengengxenye ethobelayo, unesiqiniseko sokuthi awuyi kukhangela kakhulu.
Abanye abantu bezilwanyana zengqungquthela bathi umntu kufuneka "ayeke xa egazini", kunye nabanye, ngoko kuphela ukuzonwabisa okugqibeleleyo kuqala. Yisihloko ngasinye apho wonke umntu kufuneka ahlole iimida zawo. Akukho myalelo wendawo yonke yokuba kufuneka ubuhlungu obukhulu okanye busebenziselwe ukusetyenziswa kwezesondo. Kodwa ihlala: Yonke into yokumodareyitha.